Injineerada Kooxda - Shanghai May Maqaarka Macluumaadka Teknolojiyada Co, Ltd.
Injineerada AI algorithm
MEICET waxay leedahay patent algorithm u gaar ah ---- Maqaarka Cloud Algorithm.
Al Is-barasho, horumarin jaban, 9 ilbiriqsiyo baaris khabiir.
Kuwani waxay ka dhigayaan inay ka soo saaraan xogta saxda ah sawirka sawirka saynis ahaan
Heer sare UI Isdhexgalka injineerada Naqshadeynta
Waxaan xooga saareynaa naqshadeynta guud ee isdhexgalka aadanaha-kumbuyuutarka, caqliga howlgalka, iyo isdhexgalka quruxda badan, si aan uga wada shaqeyno xalal hal abuur leh oo kaa caawinaya inaad kobciso ganacsigaaga oo aad ka dhex muuqato tartanka.
Injineerada Horumarinta Codsiga Barnaamijka
Kooxdayadu waxay la jaanqaadayaan isbeddellada firfircoon ee suuqa waxayna ka jawaabayaan horumarka cusub ee barnaamijka. Oo waxaan ku siin karnaa cusbooneysiin bilaash ah halkii 3 ~ 6month ee adeegyadaada waqtiga ku habboon.
Waxaan la shaqeyneynaa Akadeemiyada Sayniska ee Shiinaha, Naqshadeynta naqshadda isha iftiinka khabiirka Isha iftiinka wajiga waxay dabooshaa 95%; OEM, ODM waa la heli karaa.